Qaraxyadaa Dalka dhaca,forensic scientific Investigation ayey u baahan yihiin | Ibrahim Abdi Geele
Qaraxyadaa Dalka dhaca,forensic scientific Investigation ayey u baahan yihiin
Oktoobar 28, 2017 jinniishumi	Faallo u dhaaf
wixii ka dambeeyey 2012 Caasimadda Muqdisho waxaa ka dhacayey qaraxyo aan caadi ahayn uma muuqanayey inay ahaayeen, kuwo ka itaal badan wax lagu sameyn karo dalka gudahiisa, ama u baahan hab warshadaysan oo lagu samayn kato Awood qasaaro baaxadaasi leh geysan karo.
Waan u soo joognay dalka burburkiisa, waxaase qofkasta u muuqanaysa in dhibatada ku dhacday Ummadda ee ay soo mareen uu ka duwan yahay, waxyaaba hadda dhacaya, waxaadna moodaysaa in ay jiraan waxyaabo dibadda looga keenay soomaaliya, mar haddii aysan noqon karin Aalado lagu habayn karo dalka dhexdiisa.
Hase ahaatee, waxan doonayo inaan qormadan kaga hadlo maaha, cidda keentay awooda Hubka intaasi la eg, ama cidda fulinteeda ku caan baxday oo had iyo jeer dusha looga qoro, ama lagu tilmaamo, si loo maaweeliyo caqliga ummadda soomaaliyeed, uguna mashquulno dhibaatada dadkeena iyo dalkeenaba ku dhacdo.
Cilmiyan Qaraxo waa dhacaa, waana wax muuqdo qasaarihiisu, waxaanse lays weydiin markuu dhaco, maxaa la socodo kara oo KIMIKAAL ah oo dadka gurmadka u tagay meelaha uu ka dhacay ka qaadi karaan mustaqbal, iyo xanuunada ay ka qaadi karaan. Markaan sidaasi leeyahay waxaa laga yaabaa in qofka qaraxa samaynayo ee dadka intaasi la eg gumaadayo, uu soo qaadan karo waxyaabo ka dheeri ah oo KIIMIKAAL ah, si inta meesha ku dhamatay ama dhaawacantay maahee, inta Gurmadka iyo gargaarka ugu timmaado ayaguna aysan uga baxsan goortay doontaba ha dhinteen.
Haddaba si arintaasi looga gaashaanto, waxaynu u baahanahay inaan sameyno mustaqbalka:
1-marka ugu horaysa in so mutadawacnimo ah isu soo diiwaan galiyaan dhamaan dadka ka qayb qaatay dhibaatadii qaraxyada ee la soo dhaafay, kuwii gurmadyada kala duwan ku jiray iyo dadkii ka bogsaday dhaawacyadaasi, si haddii ay jiraan xanuuno looga daweeyo, ama ugu yaraan loo hubiyo in dadkaas ka caafimaad qabaan noockasta oo KIIMIKAAL sumeyn kara aadamiga iyo Bay’aduba.
2. In hadda wixii ka dambeeya shacabka laga illaaliyo lagana fogeeyo dhamaan meelaha qaraxyada ka dhacaan oo qof dambi u dhex galin, si loo illaaliyo caafimaadka qofka Muwaadinka ah ee Soomaaliyeed ee gurmadka u tagaya meelaha dhibkaasi ka dhaco.
3. Dhaawacada qaraxyada ka dhasha inaan lagu dhex daadin meelaha dhaawacyada ka horeeyey ee caafimaad ahaan u siiyaalay Hospitalska aan la dulgeyn illaa laga ogaado inuu qofka qaraxa ku dhaawacmay ka caafimaad qabo wax ka baxsan dhaawaca soo gaaray, loona illaaliyo ummadda dhaawac iyo dhaawac la jooga ah ee Hospitals-ka jooga.
4. In Shaqaalaha Caafimaadka ee tagaya meelaha Qaraxyadu ka dhaceen loo sameeyo waxyaabo Safety Materials ah oo ay ka xirtaan, iyo qalab precaution, ama digniino sameeya oo ay isticmaalaan hay’adaga amaanka dowladda, ama la sameeyo wakaalad arimahaas kala shaqeysa Shaqaalaha Caafimaadka Gurmadka degdegka ah.
5. In dhamaan Burubura qaraxka oo dhan loo sameeyo meel lagu kala saaro oo Scientific ahaan loogu baarno cidda samaysay waxyaabaha qarxa ee loo adeegsaday qaraxa markaasi dhacay, loona hubiyo arintaasi, bal inay tahay mid banaanka laga keenay iyo waxyaabo dalka gudahiisa lagu sameeyey, iyo nooca KIIMIKAAL ahaan laga sameeyey qoraxa, si record buuxa oo dhamaystiran looga sameeyo, loona ogaado sida ay u kala duwan yihiin.
Markaan sidaasi leeyahay waxaan aamisanahay in dowladdeenu dadaaal aad u weyn ku jirto oo aysan waxba ka reeban waxa awoodi kartay, laakiin shacab ahaan aan u baahanahay inaan ku darno wixii ka dhiman ee aan isleenahay waa u baahan yihiin in lagu daro, si aynu u soo ceshano nookasta oo dowladnimadeena ka dhiman tahay.
Waxyaabaha keeno kara qaraxyada iyo maadooyinka loo adeegsado, sida dalka lagu soo galin karo, iyo meelaha laga keeni karo, wixii itaalkeena aan ka daraaseyn karno waxaan ku soo qaadan doonaa qormooyinka dambe hadduu Illaahay idmo.
Illahay ayey Mahad oo dhan u sugnaatay.
Previous PostEthiopian Plots Over SomaliaNext PostHADIMADA AY HORMUUDKA KA YIHIIN, SHABAAB IYO MAAMUL GOBOLEEDYAD